Bichar Khabar » कसैको भ्रममा नपर्नुस ! जापानमा काम गर्न जाने स्पष्ट खाका तयार छैन
16 Feb 2019 04:02:01 PM | No Comments
यतिवेला जापानमा काम गर्न जान पाइने अासमा कयाै नेपाली युवाहरू जापनिज भाषा अध्ययन गिररहेका छन् । अाजैमात्र सम्पन्न जापनिज भाषा परिक्षा न्याट टेष्टमा पनि विद्यार्थीकाे उल्लेख्य उपस्थिति रहेकाे थियाे । कामकाे खाेजीमा जापानमा अध्ययनका लागि हजाराैँकाे संख्यामा प्रत्यक बर्ष नेपाली युवाहरू विदेशिने गरेका छन् भने अब कामकै लागि सरकारी स्तरबाटै लाने भएपछी अाम नागिरककाे चासाे त हुने नै भयाे । तर जापानले कसरी लान लागेकाे हाे ? कहिले देखी लान लागेकाे हाे ? जापान नेपालीका लागि उपयुक्त छ कि छैन यसै विषयमा जापान अध्ययन सम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्दै अाएका सेताे एकेडेमीका सञ्चालक एंव स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ फेकनका महासचिव भुपाल तामाङ संग विचारखवर डटकमले गरेकाे कुराकानी ।
विद्यार्थी भिषामा जापान जाने प्रक्रिया कस्तो रहेको छ ?
जापानका लागि सरल प्रक्रिया रहेको छ । सर्वप्रथम जापानका लागि जापानिज भाषा अध्ययन अनिवार्य रहन्छ । जापानिज भाषाको पढाइ नगरी जापानका लागि कुनै पनि प्रक्रिया शुरु हुँदैन । भाषा अध्ययन सँगसँगै भाषाको विभिन्न तहगत परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । जापानमा गएपछि पनि भाषा नै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले नेपालमा जति राम्रोसँग भाषा पढ्यो त्यति नै जापानमा सहज हुने गर्छ । भाषा राम्रो हुनेले अवसरहरू पनि राम्रै पाउने गर्छन् । त्यसपश्चात् विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कलेज, स्कुलहरू छनोट हुन्छ । शैक्षिक सत्र, प्राप्त अङ्क, नियमित विद्यार्थी हो कि होइन, जापान गएर उच्च शिक्षा पढ्न सक्षम छ कि छैन, परिवारिक आर्थिक हैसियत के–कस्तो रहेको छ त्यो पनि जापानिज सरकारले हेर्ने गर्छ । त्यसैले बैंक ब्यालेन्स, ट्रान्जेक्सन, वार्षिक आम्दानी, सम्पत्ति विवरण, कर तिरेको कागजात आवश्यक पर्दछ । जापानले विशेष गरी विद्यार्थी जापान गई अध्ययन गर्न सक्षम छ कि छैन र अभिभावकको आर्थिक स्थिति के कस्तो छ, त्यो हेर्ने गर्छ ।
यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि जापान जान पाउँछन् त ? भिषा अवधि कति हुन्छ ,विद्यार्थीले काम पनि गर्न पाउँछन् ?
प्रक्रिया पूरा गर्दैमा जापान जान पाउँछन् भन्ने हुँदैन । प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीको जापानको अध्यागमन कार्यालयमा पेस हुन्छ । अध्यागमनले सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी प्रदान गर्छ । जसले इलिजिबिलिटी पेपेर पाउँछ ती विद्यार्थीले नेपालस्थित जापानिज राजदुतावासमा भिसाको निम्ति आवेदन गर्न सक्छन् । जापानको भिसा अवधि कलेज, स्कुलको अवस्था हेरेर फरक हुन्छ । सामान्यताया कम्तीमा ६ महिना देखी २ वर्षसम्मको भिसा पाउँछन् । विद्यार्थीले हप्ताको २८ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछन् ।
अहिले जापानमा वर्किङ भिसामा पनि नेपाली कामदार जान पाउने भएका छन् ,वर्किङ भिसाको प्रक्रियाको बारेमा केहि बताइदिनुस न ।
अहिले जापानमा वर्किङ भिसामा नेपाली कामदारलाई लाने सम्झौता भएको छ तर प्रक्रियाबारे भने स्पष्ट खाका तयार भईसकेको अवस्था भने छैन । जापानले नेपाली दक्ष कामदार लाने कुरा गरेको हो यो हामी नेपालीहरुको लागि ठुलो अबसर पनि हो । निकट भविश्यमा जापान सरकारले नेपाल लगाएत नौ वटा देश बाट १४ वटा विधामा कामदार भित्र्याउँदै छ । यस बारेमा छलफल गर्न जापान सरकारको प्रतीनीधी मन्डलको नेपाल भ्रमण समेत सम्पन्न भैइ सकेको छ । वर्किङ भिसाको बारेमा कुरा गर्दा यो दुई देशबीच कामदार कुन प्रक्रियाबाट लाने ,कुन बिधीबाट कामदार छनौट गर्ने, त्यस्को टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । अहिले सुन्नमा आए अनुसार भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणबाट कामदार छनौट गर्ने कुरा आएको छ तर कुन तहको परीक्षा लिने हो, परीक्षा लिने निकाय कुन हो, यो सबैको टुङ्गो भने लागेको छैन । यहाँ के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने दक्षिण कोरियाले कारमादार लगेको जस्तो गरेर जापानले कामदार लान लागेको भने होइन । सामान्यतया भाषा गत दक्षता नै एन फोर लेभल उत्तिर्ण गर्न सामान्य व्यक्तीले करिव ६ महिना मिहिनेत गर्नु पर्छ । यसलाई भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कूलहरुले पनि विद्यार्थीलाई बुझाएर मात्र अध्यापन गराउन जरुरी छ । कति समयपछी कति जना कुन कामका लागि जापानमा काम गर्न जान पाउँछन् भन्ने निर्कोल नभएसम्म युवाहरुलाई भ्रम छर्ने काम गर्नु हुँदैन ।